Ndị ihe ọghọm ihe ọghọm chọrọ ịkwụsị ike Boeing iji kwado ụgbọ elu
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ndị ihe ọghọm ihe ọghọm chọrọ ịkwụsị ike Boeing iji kwado ụgbọ elu
Airlines • Aviation • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • News • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Federal Aviation Administrator (FAA) Steve Dickson gbara akaebe taa (Wednesday, Nọvemba 3, 2021) awa atọ n'ihu Kọmitii Sineti ka ndị ezinaụlọ ndị ihe mberede metụtara nọdụrụ ọdụ na ndị na-ege ntị. Akaebe Dickson na-abịa otu izu mgbe ọ gbasịrị akaebe n'ihu Kọmitii Ụgbọ njem na akụrụngwa akụrụngwa US maka usoro asambodo nke ụgbọ elu ọhụrụ. Akaebe ya na-abịa afọ atọ sochiri ihe mberede Lion Air 610 nke gburu mmadụ 189 nọ n'ụgbọ ahụ na ihe mberede nke abụọ ka ọnwa ise gachara nke Boeing 737 MAX8 ọzọ dara mgbe ọ gbagoro na Etiopia gbuo mmadụ 157 niile nọ n'ụgbọ ahụ.
Sinetọ US Maria Cantwell (D-WA), Onye isi oche nke kọmitii Sineti na azụmaahịa, sayensị na njem, kpọkọtara kọmitii zuru oke ịnụ ntị.
Akpọrọ ya aha "Mmemme Ndozigharị Nchekwa Ụgbọelu."
Ọ nyochara ngwa ngwa nke mmejuputa nchekwa ụgbọ elu, asambodo na mgbanwe nleba anya nke Iwu ụgbọ elu, Asambodo, Safety and Accountability Act (ACSAA) nke 2020 nyere iwu.
Ndị omebe iwu tụlere ụzọ FAA ga-esi rụpụta ACSAA na ọrụ ya iji mejuputa ndokwa nke iwu dịka usoro oge ọgbakọ nyere iwu.
Ruo awa atọ, Dickson tụlere isiokwu ndị dị ka ndị nnọchi anya FAA na usoro asambodo, omenala nchekwa na usoro nleba anya kemgbe ACSAA yana mmetụta COVID na nhazi ụgbọ elu ugbu a.
Ọtụtụ ndị ezinaụlọ nwere ike ịga na nnọkọ Senate taa ma n'onwe ma ọ bụ site na ịntanetị.
Michael Stumo nke Massachusetts, onye nwa ya nwanyị Samya Rose Stumo, 24, nwụrụ na okuku ahụ, toro Sen. Ed Markey (D-MA) maka ịjụ mgbe FAA ga-akwụsị ịtụkwasị Boeing obi na ịchịkwa onwe ha. Dickson kwuru na FAA na-ejigide ụfọdụ ọrụ nchịkwa ugbu a, mana Stumo kwuru na nke ahụ pụtara na onye nrụpụta na-aga n'ihu na-ahazi onwe ya n'ọtụtụ ọkwa. Stumo gbakwụnyere, "Onye nrụpụta agaghị agbanwe ruo mgbe ewepụrụ ikike ịchịkwa onwe ya. Boeing ga-egosipụtakwa na ọ tozuru oke na ntụkwasị obi. "
Nadia Milleron nke Massachusetts, onye nwa ya nwanyị Samya Rose Stumo, dị afọ 24, nwụrụ n'ihe mberede ahụ, gakwuuru Dickson mgbe ọ nụchara okwu wee sị, "Ekwela ka Boeing ree ụgbọ elu ọ gwụla ma a chọrọ ọzụzụ ndị ọkwọ ụgbọ elu dị maka ụgbọ elu ahụ." Nzaghachi ya bụ na ọ ga-eleba anya na ya. Otu n'ime nsogbu ndị siri ike na ihe Mkpọka nke Boeing 737 MAX bụ na mbụ ndị isi Boeing boro ndị na-anya ụgbọ elu ụta; Otú ọ dị, e kwere ka e jiri usoro ngwanrọ ọhụrụ kwadoro ụgbọ elu ndị ahụ nke a na-enyeghị ndị na-anya ụgbọ elu ọzụzụ na mbụ ma ọ bụ na-etinyeghị usoro ngwanrọ ọhụrụ n'akwụkwọ ntuziaka ụgbọ elu ahụ. Stumo na Milleron n'onwe ha gara n'ụlọ ikpe nke taa.
Ike Riffel onye ụmụ ya nwoke abụọ nwụnahụrụ n'ihe mberede Boeing dị na Etiopia kwuru, sị, "Boeing aghọgbughị naanị FAA, ha ghọgburu ọha na eze na-efe efe na ụwa dum na omume ha butere ọnwụ nke mmadụ 346. FAA anyị agaghị abụ 'ọkọlọtọ ọla edo' nke nchekwa ụgbọ elu ma ọ bụrụhaala na ekwe ka aghụghọ na aghụghọ pụọ n'enwetaghị ntaramahụhụ."
Chris Moore nke Toronto, Canada, nna nke Danielle Moore dị afọ 24, onye nwụrụ n'ihe mberede Boeing na Etiopia, na-ekwusi okwu ike n'ihe gbasara nchekwa ụgbọ elu. O were iwe na ihe karịrị ọkara nke ikpe a na-anụ taa metụtara ndị na-abụghị Boeing 737Max ma kwuo, sị, "Ndị Sineti kwesịrị ịkpọ oku a, 'Hey Dickson, Gịnị na-eme?' Ndị omebe iwu kwesịrị iji akụkụ nke nchekwa nke a kpọrọ ihe - ha nwere ike inwe mkparịta ụka dị iche iche gbasara ihe ndị ọzọ na ntị ọzọ. "
Ezinụlọ na ndị enyi ndị ha hụrụ n'anya nwụnahụrụ n'ihe mberede ụgbọ elu Boeing 737 MAX na 2019 gara n'ihu na-arịọ Congress na Ngalaba Ụgbọ njem US (DOT) ka ha kwụsị ikike onye na-anya ụgbọ elu iji kwado ụgbọ elu nke ya. Organization Designation Authority (ODA) nke na-enye ndị ọzọ ohere ịrụ ọrụ nke FAA.
Ọtụtụ narị ezinụlọ na ndị enyi ndị ha hụrụ n'anya nwụnahụrụ n'ụgbọ elu Boeing 737 MAX rịọrọ ndị ọrụ DOT, gụnyere odeakwụkwọ njem Pete Buttigieg na Dickson ka ha wepụ ikike Boeing inye ụgbọ elu ya n'ihi na "o doro anya na Boeing abụghị ụlọ ọrụ nwere ike ịtụkwasị obi na ya. ọrụ nchekwa ọha nke ODA nyere,” dịka ha siri kwuo arịrịọ maka DOT ụbọchị Ọkt 19, 2021.
Arịrịọ a na-ehota ihe 15 mere omume ọjọọ Boeing ji chọọ FAA ịkwụsị Boeing ODA gụnyere ụlọ ọrụ "na-eduhie FAA" gbasara ụzọ ụgbọ elu MAX si arụ ọrụ "site n'okwu na-eduhie eduhie, ọkara eziokwu na ihe efu," na-eke "omenala ODA na na-etinye nrụgide na-enweghị isi n'ahụ ndị ọrụ injinia ka ha ghara inwe ike ịme mkpebi onwe ha n'enweghị esemokwu nke mmasị nhazi," yana "ịghara ikpuchi ODA site na ebumnobi uru Boeing."
N'ihu ọzọ, Mark Forkner, onye bụbu onye isi ụgbọelu Boeing ọhụrụ, ka a ga-ekpe ikpe na Forth Worth, Texas Federal District Court na ebubo isii maka omume ya metụtara 737 MAX, gụnyere ịgha ụgha n'oge usoro ntinye akwụkwọ. ụgbọ elu ọhụrụ ahụ. Ọ kwadoro na ọ bụghị ikpe n'ụlọ ikpe gọọmenti etiti na Texas Oct. 15, 2021. A na-ekpe ikpe ya maka Dec. 15 na Ụlọikpe gọọmenti etiti Forth Worth.
Tomra Vocere nke Massachusetts onye nwanne ya nwoke Matt nwụnahụrụ n’ihe mberede ahụ kwuru, “Mr. Forkner emeghị naanị ya na snafu injinia nke gburu mmadụ 346 na ekwesịghị ịbụ naanị ebubo ebubo na ọnụ ọgụgụ a. Onyinye nke onye ọrụ etiti bụ mkparị nye onye ọ bụla onye otu ezinụlọ nwụnahụrụ na ụgbọ elu Boeing. Mkpughe nke nyocha, ịgba akwụkwọ, ikpe ndị omeiwu, na panels na-emepụta ihe ọ bụla: enweghị nghọta, enweghị ajụjụ, enweghị nkwenye nke ikpe ọmụma ma ọ bụ mgbanwe omenala usoro na Boeing ma ọ bụ FAA. Maazị Forkner bụ ihe nwute n'ihi na enweghị mgbaghara n'onyinye Boeing: enweghị ndị isi, enweghị ndị otu bọọdụ, enweghị ikpe ziri ezi.”